Gboard ga - eme ka kọọpị na mado ọrụ ọhụrụ rụọ ọrụ | Gam akporosis
Google na-anwale ihe a idetuo na mado nhọrọ, a ga-enweta atụmatụ ahụ n'isi nso na ahụigodo niile Gboard nke gam akporo. Ọrụ a ga-akpọ "clipboard aro" obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ozi ọma nye ndị chọrọ ya iji depụta adreesị ma ọ bụ ederede dị iche iche.
Ugbu a la Detuo tapawa nhọrọ bụ nnọọ ihe na-agwụ ike maka inwe aka ịhọrọ nke a, mana n'oge na-adịghị anya ọ ga-adị ngwa ngwa karịa ka ọ dị na mbụ. Ọrụ ọhụrụ a ga - eme ka onye ọrụ gam akporo gosipụta ngosipụta ikpeazụ e depụtaghachiri na nke anyị nwere ike ịpị naanị otu pịa.
Nhọrọ eji eme ihe
Ejirila nhọrọ a ogologo oge, ikike iji ya ga-adabere na nka nke ọ bụla, mana ọ naghị adị mfe mgbe niile. Mgbe ụfọdụ ọ na-agaghị ekwe omume i toomi ederede na-enweghị nke ọ bụla n'ime ndị cursors abụọ ahapụ anyị, mana nke a ga-agwụ jiri atụmatụ clipboard.
Google etinyela ọrụ a ụbọchị ole na ole gara aga, ọ bụ ezie na ị gaghị enwe ike ịhụ ya ebe ọ bụ na akaghi aka. Ihe a bụ inwe ike ịnweta ya, ọhụụ ya bụ ihe ọzọ a ga-ekpebisi ike, ebe ọ ga-egosi n'etiti nhọrọ keyboard.
Ewezuga nhọrọ nke idetuo na mado anyị ga-enwe a kpọmkwem ohere ka clipboard, nke ikpeazụ ga-erite uru nke ihe ọ bụla ga-abịa na ya. Gboard bụ ndabara ahụigodo nke ngwaọrụ anyị, ka oge na-aga, igodo ndị na-asọ mpi apụtawo, dịka ọmụmaatụ Swiftkey.
Ọ bụrụ na ị kwụsịrị iji ya Gboard oge ụfọdụ gara aga ọ dị mma na ị nye ya ohere ọzọ mgbe ọ gbakwụnyere atụmatụ nke ọtụtụ n'ime ndị na-eji ekwentị gam akporo ugbu a rịọrọ. A na-ahazi Ntuziaka Mgbaaka ga-adị na ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Gboard ga-ekwe ka nnomi dị ngwa na mado na ọrụ ọhụrụ